Akụkọ - KF932 KF86 Relay Tester gafere nyocha ndị ikwu mba
KF932 KF86 Relay Tester gafere nyocha ndị ikwu mba
Naanị na October 19, 2020 ，
Nwanyị ọhụrụ KF932 Handheld IEC61850-Tester &
Agafee Ule .dị
Site na National Power Transmission Distribution Safety Control Equipment Quality Supervision Nnyocha Center
Na State Grid Electric Power Research Institute Experimental nkwenye Center,
Dị ka nnyocha ọkọlọtọ nke
DL / T-624-2010 the Relay Protection Microcomputer nwalee ngwaọrụ ọrụaka ọnọdụ &
DL / T-1944-2018 nwere ọgụgụ isi substations handheld ngwa anya digital mgbaàmà ule ngwaọrụ nkọwapụta nkọwapụta &
DL / T-1501-2016 dijitalụ agba anọ nchedo ule ngwaọrụ Nka na ụzụ ọnọdụ
Kedu nke na - enweta nchọpụta mba ụwa nke CNAS-L1379 & PAL & ilac-MRA.
KF932 aka-ejide IEC61850 Testier na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịrụ ọrụ sistemụ ọkụ eletrik na-arụ ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi. Ọ bụ ngwaọrụ nnwale eji na ọkachamara ubi nke microcomputer nchedo, ọsọ agba anọ nchedo, excitation mmesho, na kpatara edekọ.
Na-agbaso ọkọlọtọ IEC61850, nke a na-etinye na nchedo nchekwa dijitalụ, Tụọ ma na-achịkwa ngwaọrụ, onye nwere ọgụgụ isi, jikota Unit na akara njikwa usoro nyocha na nchọpụta.
4.3 'Ihuenyo mmetụ aka na ahụigodo, izute dị iche iche iji agwa.
4400mAh nnukwu batrị lithium, ọrụ na-aga n'ihu karịa awa 10.
Obere obere, -0.75kg ibu dị mfe obere.
KF86 Compact IEC61850 6-phase relay test setịpụrụ nke nwere oke ziri ezi & azịza zuru oke (ịgbakwunye uru IEC61850 dị mma na GOOSE), nwere ike mezuo ihe niile achọrọ maka nchọpụta na nbipu nke IEC61850 IEDs, Merge Units, sistemụ njikwa ọdụ na usoro nchebe ọdịnala.
8 ngwa anya ọdụ ụgbọ mmiri ịgbaso IEC61850 nlele uru na GOOS;
6x130V voltaji na 6x20A ugbu a elu ziri ezi analog ọwa mmepụta;
Inbuilt GPS, kwado ọrụ mmekọrịta IRIG-B;
9.7 inch ihuenyo mmetụ & 10kg arọ maka mfe ejikwara offline ma ọ bụ na laptọọpụ;
KINGSINE R & D bụ ọtụtụ ndị ọkachamara ọkachamara, ndị gụnyere Post-Doctors, Doctor, Masters na ndị ọkachamara nke ụlọ ọrụ ahụ.
KINGSINE R & D otu a mgbe nile emebe otutu ngwaahịa nke adabara ahịa mmepe, dị ka Universal Relay Tester K3163i, Engybrick Power nlekota Ngwọta nke mfe echichi na wdg
Kingsine nwekwara ndị ọkachamara na ndị ọkachamara siri ike ma nwee ike ịnye ngwọta ule eletriki kwekọrọ na nkọwa ndị ahịa.
Na ya kere All-in-One imewe echiche na ọtụtụ nchọpụta Kemịkalụ, KINGSINE ngwaahịa a mma mma na-atụ aro site China National Institute of Metrology na ike nnyocha institutes nke ọ bụla n'ógbè dị ka nke ọma dị ka OA akwụkwọ.
Esi esi agba anọ Tester, Ọgụgụ ọsọ agba anọ Tester, Nchekwa ọsọ agba anọ Tester, Relay Test, Nyocha nke Digital, Anya Nchekwa ọsọ agba anọ Tester, Ngwa niile